Imfundo yemvelo yabomama abancane
Ukuzalwa sekusekude, futhi amakhilogremu angeke afune ukunyamalala. Kwabesifazane abasebasha, la maphilisi "awakhulelwe" adala izinkinga eziningi futhi angakhululeki. Phela, yonke intombazane ifuna ukubukeka imnandi kakhulu futhi ihlanzwe nganoma yisiphi isikhathi. Yingakho iningi lamantombazane amancane, ngokushesha ngemuva kokubeletha, azama ukubuyisela amafomu awo endala emizimbeni yawo. Kodwa, ngeshwa, akuwona wonke umuntu ophumelelayo. Futhi imfundo engokomzimba eqinisiwe, ukuqeqeshwa, ukudla okudliwayo, kaningi kunokuba kungenjalo, akusho nje. Noma, ngokuvamile, balimaza impilo yabomama abangazange baphinde baphumele ngemuva kokuzalwa. Ngakho-ke, omama abasha bayaqhubeka bebuka ukucabangela kwabo esibukweni benokunganeliseki okufanayo futhi benengwa futhi becasuliwe ngesithombe sabo esingaphelele. Kodwa ukuphelelwa yithemba akukaze kuwufanele. Ikakhulukazi kulesi simo. Khumbula ukuthi ukubuyisela isibalo kwimingcele yaso yangaphambili kuyindaba engokoqobo futhi ayiyinkimbinkimbi enjalo. Into esemqoka lapha yindlela efanele futhi elinganisiwe, ukubekezela nokukhuthazela. Futhi kuhlanganise nakho konke, nesifiso sakho esinamandla sokuphinda uthole isimo sakho sangaphambili. Okokuqala, kulokhu, akudingeki ukudla okudingekayo, kodwa isiko lomzimba elikhethiwe kahle. Imfundo enjalo yabomama kufanele iphephile ngokuphelele empilweni yabo, kodwa ngesikhathi esifanayo inikeze imiphumela emihle. Ngakho-ke, ngaphakathi kohlaka lwesihloko sethu samanje, okuthiwa "Imfundo Yezemvelo Yabamama Abasha", sizozama ukuthola ukuthi iziphi izindlela zokuzivocavoca ezisebenza kahle futhi ziphephile kumama osemncane.
Emfundweni yethu engokomzimba yabomama abancane, kunezivivinyo ezikhethekile zokuqinisa imisipha yesifuba, izinyopho futhi, okubaluleke kakhulu, isisu namathambo. Lezi zivivinyo zilula futhi kulula kumama. Ngakho-ke, azidingi isikhathi esikhethekile esabelwe sona, okusoleka uma unesana esincane ezandleni zakho, noma ngaphezulu uma uvakashela isikhungo sempilo noma izakhiwo zezemidlalo ezikhethekile kumama omncane. Ukufeza lezi zivivinyo ezimbi, awukwazi ukuphazanyiswa kusuka emntwaneni wakho, kodwa ngokumane ngenkathi uhamba noma udlala naye. Kodwa qaphela: ngaphambi kokuba uqale ukwenza lezi zivivinyo ngokuqondile, usadingeka uthintane nodokotela wakho futhi ucacise naye uma ungaqala ukusebenzisa umzimba womama omncane futhi ngokubaluleka kokukuphishekela. Lokhu kungenxa yokuthi ungase ube nezimo ezikhethekile ezikhethekile (isibonelo, isigaba sokugcina), lapho kunconywa ukuba wenze ukuqeqeshwa okungokwenyama okwengeziwe noma ukushiya ngokuphelele ezinye zazo. Yebo, uma udokotela echazile uhlelo lwezifundo zakho futhi usethe usuku lapho ungaqala khona, hamba phambili. Khumbula nje ukuthi ngaso sonke isikhathi udinga ukuqala amancane futhi akukho nhlobo ungazisebenzisi ngokweqile.
Ngakho-ke, ukuxilongwa kwezivivinyo kumama omncane kubonakala kanje:
1. Ukuzivocavoca, okuqinisa imisipha ye-dorsal. Beka ingane emgqeni bese umi phambi kwakhe ku-chetveriki. Bese uvula futhi udwebe esiswini sakho, ugijime futhi ujikeleze ngemuva kwakho njengekati. Ekuphumuleni, buyela esimweni sokuqala. Lo msebenzi kufanele uphindwe izikhathi eziyishumi.
2. Ukuqoqa ingane ukuhamba, ungakhohlwa ukuthatha izimbongolo ngesisindo se-1, 5 kuya ku-2 kilogram. Ukuhamba nomntwana ungenza kanyekanye izinkinobho ezihlukahlukene zamabhentshi eziqinisa amabhande e-biceps kanye ne-triceps.
3. Ukuzivocavoca, okuqinisa imisipha yamathanga nezandla. Beka umntwana phezu kombhede phambi kwakho, bese ulala ngakwesokunxele sakho. Bese uncika phambili kwesandla sakho sokunene phansi, uphinde uphakamise isandla sakho sokungakwesokunxele, uphakamise isikhumba sakho ngenhla. Kulesi sikhundla, udinga ukuhlala imizuzwana embalwa bese ubuyela esimweni saso sokuqala. Lo msebenzi kufanele uphindwe izikhathi eziyishumi. Bese uphinda into efanayo izikhathi eziningi, uphenduka ngaphesheya.
4. Lala phansi emgodini, uguqe ngamadolo akho, ukubeka ingane emadolweni (into esemqoka ukuthi ukhululekile futhi ephephile), ukuthatha ingane ngokuqinile ngamathanga, kancane kancane unciphise imilenze yakho ngenkathi ephakamisa kancane kancane. Bese ubuyela esimweni sokuqala. Lo msebenzi kufanele uphindwe izikhathi eziyishumi.
5. Lokhu kuhlolwa kubhekwa njengento elula, emnandi futhi elula yinkimbinkimbi yonke. Ukuze uphumelele, udinga ukubeka ingane yakho ku-stroller bese uya naye epaki. Futhi ngenkathi ingane ilele emoyeni omusha, ungakwazi kalula ukuqinisa imisipha yemilenze yakho. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukwandisa ijubane le-gait yakho. Ukuphefumula phakathi nalesi sivivinyo kunjengejubane ngangokunokwenzeka. Ngendlela, lokhu kuvivinya, futhi kuhlanganise nakho konke, kuphumelela kakhulu kulungisa amaphaphu akho.
Ngakho-ke sibuyekeze imizimba emihlanu eyisisekelo yomzimba womama osemncane. Sicabanga ukuthi kumele bakusize ukuthi ubuyele esimweni sakho sangaphambili.
Futhi ekugcineni, ake sibheke imithetho eyisisekelo yokuphepha kanye nezincomo zamasha omusha.
Amanye amantombazane amancane ayaqiniseka ukuthi ngokushesha ngemuva kokubeletha, udinga nje ukuthatha umshini wakho bese uyagwedaza kanzima. Baqiniseka ukuthi lokhu ngokuqinisekile kuzosiza ukuba inyamalale isisu esabonakala. Kodwa lapha kubalulekile ukuqaphela iqiniso lokuthi ochwepheshe abayincoma ngalokhu. Ukungaboni kahle okunjalo kungabangela ukuphuma kwegazi. Kodwa ungenza ukuzivocavoca okulula futhi okulula ngesonto (hhayi usuku ngaphambili) emva kokuzalwa ngokwakho. Futhi-ke, lokhu kuphela uma wena emva kokuzalwa ungaba nezinkinga nempilo yakho.
Futhi ukuvivinya okuhle kunazo zonke kumama osemncane kubonakala njengokubhukuda. Kodwa kulokhu kubalulekile futhi ukwazi isilinganiso. Kunoma yikuphi, ungadabuli ibanga elide. Njalo ugijime ku-sly. Ngendlela, kutuswa ukuba usebenzise injabulo enjalo imizuzu engu-20 kuya kwangu-25 ngosuku. Ngokusho kochwepheshe, ukubhukuda okungakwazi ukuvuselela umzimba wesifazane emva kokuzalwa ngokwawo. Ngakho kufanele uhlale ukhumbule ngale nqubo yamanzi futhi uma kunokwenzeka, bhalisa echibini lokubhukuda lokubhukuda. Ngikholelwa, ngeke ulizisole. Inhlanhla kuwe!
Indlela yokuvimbela ukushisa kwesibindi lapho udlala imidlalo
Ungadla kanjani kahle uma wenza ukubunjwa?
Ukuzivocavoca umzimba kwabesifazane ekhaya
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngokushesha futhi ungabi nesisindo emuva
Yoga umzimba ukukhulisa amandla
I-Horoscope ye-Aquarius Yomama ka-June 2017
Ukupheka kwe-Culinary kwama-pancake
Indlela yokubuyisela ukufutheka ebuhlotsheni
URadik Guschin uvumile ukuthi wayengakaze azi noZhanna Friske
Yiziphi izivivinyo ezithatha ngesikhathi sokukhulelwa?
Imfucumfucu kusuka emahlathini nge sesame
Okuhlangenwe nakho okuqinisekisiwe ngezinzuzo zokubhema
I-Sporesh: izakhiwo, zokupheka, uhlelo lokusebenza
Chocolate, umphumela omubi emzimbeni
I-frayberry ice cream
Yini ongenakuyidla ekudleni
I-horoscope ngqo ngoJanuwari 2018 evela kuPavel Globa
Ibhotela le-Peanut elizenzela
I-Stew of venison
Indlela yokubheka iminyaka engu-25 ubudala eneminyaka engu-25: ukudla okuvela ku-actress uJennifer Aniston
Ayikwazi ukukhulelwa, izeluleko zabantu
Inkukhu ye-chicken fillet nge ushizi ocibilikile
Ukusebenza emva kwekhefu lokubeletha